Momba anay - Vondrona INPVC
INPVC dia marika am-barotra nanomboka tamin'ny taona 2020 ho an'ny fangaro PVC (Polyvinyl Chloride) avy amin'ny HAOYUAN PVC PLASTIC. Izy io dia misy fianakaviana lehibe misy singa vonona ho ampiasaina amin'ny granules vita amin'ny plastika sy henjana izay natao manokana sy namboarina ho an'ny fampiharana isan-karazany. Ny INPVC dia mamokatra fitambarana mahazatra na mamorona fitambarana namboarina arakaraka ny tinady, miainga amin'ny tariby sy tariby, herinaratra & elektronika, fananganana sy fananganana hatramin'ny indostrian'ny fiara sy fiara.
Izahay dia lohalaharana amin'ny teknolojia fanodinana PVC, mampiditra mihoatra ny 27 taona ny fahombiazan'ny famokarana amin'ny vokatra marobe. Ny tranokalanay ISO-9001 voamarina dia mifantoka amin'ny fiarovana, kalitao ary mandeha ho azy izay manome ny endriny avo lenta indrindra sy ny fanodinana, na amin'ny endrika vovoka na hozatra.
Ny tena zava-dehibe dia manamboatra fitaovana ara-tontolo iainana hatrany izahay hanatsarana ny faharetana. Ny vokatray rehetra dia amboarina ao anaty dingana arahi-maso aorian'ny kalitao, fahasalamana ary fiarovana. Ireo fitambarana vita sy namboarina namboarina dia ekena miaraka amin'ny fanamarinana RoHs, REACH ary FDA.
Miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanavaozana sy ny R&D, ny INPVC dia vonona hamaly ireo takiana miovaova hatrany amin'ny tsena manerantany. Ny foibem-pampandrosoana ara-teknika dia ahafahantsika mamorona vahaolana namboarina iharan'ny karazana fampiharana, ny fizotrany ary ny toetran'ny milina an'ny mpanjifanay mpanamboatra PVC.
Ireo granules novokarina tao amin'ny departemanta fanaraha-maso kalitao, dia voadinika ao amin'ny laboratoara fanaraha-maso kalitao, izay ampiarahina amin'ny tester amin'ny hamafiny, ny milina fanaovan-gazety, ny tester de hardit, ny calculer an'ny polymer, ny extruder an'ny laboratoara, sns. ny ampahany, ny granules amin'ny fantsona, ny granules amin'ny tsindrona, ny granules momba ny fahadiovana ary ny hafa, dia azo entina, arakaraka ny fenitry ny andro manerantany, ary atolotra an'ireo mpanjifa mendri-kaja.
Manolo-tena izahay hitondra vahaolana hanatsara ny fizotrany, hampihena ny vidiny ary hanatsara ny fananan'ny vokatra farany PVC ho an'ny mpanjifanay. Ny tanjonay dia ny hanangana fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpanjifanay. Ary ny mpanjifa rehetra dia mahazo tombony amin'ny fahalalantsika, ny zavatra niainantsika nandritra ny fotoana maharitra ary ny serivisinay.
Traikefa amin'ny fanamboarana 27-taona
Ny tsipika fampifangaroan'ny PVC feno indrindra
Mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Indostrian'ny plastika any Sina
Mpamatsy vahaolana amin'ny fikirakirana PVC tokana
ISO 9001 Tompon'ny rafitra fitantanana ISO9001
Laboratoara matihanina miaraka amin'ny fitaovana 65
R&D sy ekipa teknika manana traikefa an-tsaha 20taona
100% fitaovana virjina 100%
ECO-friendly miaraka amin'ny REACH, fanamarinana RoHS
Safidy fonosana samihafa
Samy misy ny kofehy vita amin'ny PVC henjana sy malefaka
Sady misy vovoka no azo ampiasaina
Fitsapana santionany maimaimpoana
Serivisy fizahana teknika maimaimpoana
Fanohanana ara-teknika matihanina
Serivisy an-tserasera 24h
Serivisy lozisialy mahomby
Fehezan-dalàna momba ny fandoavam-bola
Serivisy aorian'ny fivarotana mahavariana
Vondrona NPVC, iray amin'ireo mpamokatra sy mpanondrana vokatra marobe ao Shina ho an'ny indostria plastika polyvinyl chloride (pvc) dia manana sampana telo.
Niorina tamin'ny taona 1993, manamboatra singa 100% virijiny henjana sy malefaka ho an'ny fampiharana marobe amin'ny alàlan'ny teknika fanodinana, fitrandrahana ary fikolokoloana.
Niorina tamin'ny 2002, mamokatra sy mivarotra vahaolana additives momba ny tontolo iainana izay manome fahombiazana ara-teknika tena tsara ho an'ny indostrian'ny fanodinana plastika PVC.
3. Loux Imp. & Exp. Co., Ltd.
Naorina tamin'ny 2010, manafatra marika vita amin'ny fanodinana marika marika PVC ary manondrana fangaro vita amin'ny volo sy additives namboarina manerantany